Ma gụọ 2.3 iPhone 7 / 6s Data Recovery
2.4 Naghachi Video na Notes
2.5 Nyefee Data ka iPhone 7 / 6s
iOS 9 iPhone vs. Samsung Galaxy S6 Edge
Tupu anyị amalite anyị tụnyere n'etiti iOS 9 iPhone na Samsung Galaxy S6 Edge, ayak ngwa ngwa a lee anya na ụfọdụ ndị kasị akpali akpali ọhụrụ atụmatụ na iOS 9 abịa na. Ndị ọhụrụ a na atụmatụ ndị revolutionary ka tụnyere ihe anyị nwere nnọọ na aga mbipụta si Apple.
Ijuanya atụmatụ ke iOS 9
Transit data na Apple Maps - Na iOS 9, Apple ka ẹkenam a mkpa nke ukwuu melite iji Apple Maps n'ụdị Transit. Apple Maps nwere ike ugbu a egosi na ị na nsochi usoro nhọrọ gụnyere ozi na-ejegharị ejegharị ụgbọ ala, ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ okporo ígwè na ụkwụ, dị nnọọ ka ke ikpe na Google Maps.
Extended nkwado maka Apple Ṅaa - Ruo ugbu a Mee Ṅaa esi na-akwado nanị otu njuaka US akụ kaadị Otú ọ dị na iOS 9, a kọwakwuru ndị ọzọ na enye nakwa gụnyere Discover. Apple nwekwara akp ya Apple Ṅaa nkwado ya ọrụ na UK ahịa, nke bụkwa a ukwu na anabata mgbanwe.
New Chakwasa ihie Search - The Chakwasa ihie Search na iOS 9 ugbu a atụmatụ ihe mma Siri na a dịgasị iche iche nke ọmụma egosipụta nri na isi search ihuenyo dị otú ahụ dị ka isi kọntaktị, ngwa aro, oge na ebe ọmụma a kapịrị ọnụ wdg Ọzọkwa, ugbu a na nsonaazụ ọchụchọ ngosi videos nakwa na pụrụ ọbụna na-egwuri-enweghị na-ahapụ search ihuenyo.
Low Ike Mode - Battery management emewo a ọhụrụ itu ukwu na iwebata a Low Ike mode na iOS 9 nke mgbe ọrụ nwere ike inye onye zuru mmezi hour ojiji nke ka tụnyere gara aga nsụgharị nke iOS ndị na-enweghị a nhọrọ na-amalite.
Mma Multi Tasking ebi ndụ - iOS 9 etu ọnụ a ukwuu mma okirikiri nhọrọ ukwuu n'ihi na ya n'ikuku ana enweta n'otutu tasking window. Ka tụnyere gara aga nsụgharị, iOS 9 nwere okirikiri nhọrọ ukwuu na ngwa ọnụọgụgụ-idem ke ụdị nke a kaadị tojupụtara nke na-eme ka ọ dị mfe iji tụgharịa site na dị iche iche na-emeghe ngwa ọdịnala na ịkwụsị ndị na-enweghị isi mgbe ọ bụla na oge.
The Comparison - iOS 9 iPhone vs. Samsung Galaxy S6 Edge
Buut elu Speed ​​- Na anyị buut elu ọsọ ule, anyị hụrụ Samsung Galaxy S6 Edge ka ​​ọ dị a bit ngwa ngwa karịa iOS 9 iPhone. Ọ bụ elu na-agba ọsọ a whopping 3-4 sekọnd tupu iPhone nke bụ nnọọ ngwa ngwa.
Ike anya ihuenyo - Ị ga-jituo ike anya button bụkwaghị iOS 9 iPhone ka tụnyere Samsung Galaxy S6 Edge maka ike Off ihuenyo na-egosi. Ọ bụghị nanị na nke ahụ, iOS 9 iPhone yiri ka enweghị mgbanwe a na ihuenyo dị ka ọ ka naanị awade nhọrọ nke ịmafe gbanyụọ ekwentị ebe on Samsung, ị ga-esi a ndepụta nhọrọ gụnyere Flight mode, Malitegharịa ekwentị, Emergency mode n'elu na n'elu Ike anya nhọrọ, nke anyị hụrụ na-ọzọ adaba.
Inbuilt Theme Engine - The Samsung Galaxy S6 Edge nwere ọzọ uru n'elu iOS 9 iPhone na mpaghara nke gburugburu dị ka ọ na-abịa na ya inbuilt isiokwu engine na-ahapụ gị ịhọrọ n'etiti dị iche iche dị iche iche gburugburu, bụ ihe na ka anọghị ke ọhụrụ iOS version dị ka mma. Nanị ihe na-i nwere ike ime na iOS 9 iPhone bụ ịgbanwe akwụkwọ ahụaja ma i nwere ike ime ihe ọ bụla na-tweak ya UI.
Web Nchọgharị - N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụ ezie na iPhone na-agba ọsọ na a measly sọrọ ya isi processor mgbe tụnyere octa isi na Samsung Galaxy S6 Edge, ya iOS 9 sistemụ, na iPhone bụ ike Ibu Ibu ọtụtụ ndị weebụsaịtị ukwuu ngwa ngwa karịa Samsung si flagship ngwaọrụ.
Batrị Ike - Apple meworo ihe dị ịtụnanya ọrụ na batrị dị ka ọhụrụ na ghọrọ usoro iOS 9, e nwere ihe na-abawanye nke ruo 25% na ya ndụ batrị. N'aka nke ọzọ, Samsung Galaxy S6 Edge awade na-akpali akpali atụmatụ nke wireless Nchaji nke bụ oké mma maka ndị na-azụ dị ka mma.
Otú nyefee data n'etiti iOS 9 iPhone na Samsung Galaxy S6 Edge
Ugbu a, n'ihi na ndị gị bụ ndị na-eme atụmatụ ka ịgbanwee si gị iOS 9 iPhone ọhụrụ Samsung Galaxy S6 Edge ma ọ bụ Anglịkan, ndị kasị mkpa ga-nyefe nke data n'etiti ngwaọrụ abụọ. Ọ dịghị onye ga-achọ ka ida ọ bụla nke dị mkpa data dịka kọntaktị, foto, ozi, ngwa data wdg Ọfọn, anyị nwere oké ozi ọma n'ihi na ị dị ka anyị dị nnọọ hụrụ kasị mma ngwá ọrụ na-eme ka mgbanwe a a obi ụtọ ikuku maka gị, were a anya n'okpuru mara ọzọ.
MobileTrans Si Wondershare bụ ihe ịtụnanya ngwaahịa na-eme ka ọ ibu mfe n'ihi na ị nyefee gị photos, kọntaktị, ozi ederede, video, kalenda, music, ngwa ọdịnala & ọbụna oku na ndekọ site na otu ekwentị ọzọ, na enyemaka nke dị nnọọ 1 Pịa. Ebe a bụ otú ị nwere ike iji ya ịgbanwee n'etiti iOS 9 iPhone na Samsung Galaxy S6 Edge.
3.481.314 ndị ebudatara ya
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Wondershare MobileTrans na kọmputa gị - Windows & Mac. Ozugbo echichi dị n'elu, na-agba ọsọ usoro ihe omume na n'ụlọ peeji nke ngwa, họrọ na ekwentị ekwentị Nyefee mode ya wee Malite.
Nzọụkwụ 2: Jikọọ ma gị iOS 9 iPhone na Samsung Galaxy S6 Edge na kọmputa maka ngwa ịchọpụta na-egosi ma ndị ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo ekwentị abụọ e ahụrụ, software ga-akpaghị aka na-egosi a listi ọdịnaya na ị na ike ịnyefe, họrọ ndị na ị chọrọ na iti Malite Detuo.
Ọ bụ ya! Na n'elu mfe ma dị mfe nzọụkwụ, ugbu a, ị nwere ike mfe ịgbanwee n'etiti gị ọhụrụ iOS na Samsung ngwaọrụ.
Oge maka a ngwa ngwa nghoputa ugbu a!
Ebe hụrụ tụnyere n'etiti atụmatụ na Samsung Galaxy S6 Edge na iOS 9 iPhone, nke otu n'ime ndị a ngwaọrụ ị ga-ahọrọ ugbu a? Ka anyị mara ihe na azịza gị ga-abụ site na otu nke abụọ na-esonụ nhọrọ:
M ka na-ahọrọ iPhone na-agba ọsọ iOS 9
M ga-amasị a Samsung Galaxy S6 Edge
Olee otú Esi Music on iPhone enweghị iTunes
iPhone ide ozi n'ekwe ntị Nsogbu: Olee idozi ya
Isi nsogbu na iPhone 6 na Olee idozi ha
Olee Otú M Pụrụ Tinye Album Art on My iPhone
> Resource> iPhone> iOS9 iPhone vs. Samsung Galaxy S6 Edge